Ny fomba fanao RECELEBRATING TẾT - Ny Tany Masina Vietnam Studies
2491 Views Prof. Assoc. Hung Nguyen MANH
Fomba iray nipoitra izany nandritra ny fotoan'ny ady tamin'ny lasa, na isaky ny fotoana, noho ny toe-javatra iray, ny fankalazana ny Tết tsy azo atao amin'ny fotoana mety, noho izany ny olona dia tokony hanamboatra izany fankalazana izany ary hiantso izany fanitsiana ny Tết. The fanitsiana ny Tết koa dia midika hoe, tamin'ny fotoana tsy nanatrehana ny olon-drehetra, dia averin'ny olona fanindroany indray ny fananan'ny olona rehetra ao an-trano.
Hazo maitso TẾT (Andro faha-8 amin'ny volana voalohany)
Io fomba amam-panao io dia mbola mamela ny dian-dry zareo ao amin'ny Mỹ Tho vohitra (Bình Lục, Nam Hà) ary nampiasaina hankalazaina amin'ny faha-8 amin'ny volana voalohan'ny volana; Antsoin'ny olona io Hazo maitso Tết (Tết cây xanh).
Legend dia nilaza fa teo aloha, ny jeneraly iray no nitondra ny miaramilany tany amin'io faritra io ny harivan'ny andro faha-30 ny volana nahaterahana farany. Raha nitsahatra sy nandany ny alina dia nanome toromarika maintso ny jeneraly iray, ary nampanantena fa rehefa hiady amin'ny fahavalo dia hiverina any amin'io toerana io izy, ary raha mbola velona ilay hazo dia hanao fanasana ho an'ny vohitra iray manontolo. Rehefa niverina ny fandreseny tamin'ny Faha-8 ny voaloham-bolana voalohany, dia nitandrina ny fampanantenany izy ary nanao fanasana tamin'io vohitra iray manontolo io. Nametraka kitapo fandoroana ditin-kazo manitra teo am-pototry ny hazo ny jeneraly, nasehon'ny vary sy henan-kisoa amin'ny ravina akondro fa tsy lovia iray dia mifalia amin'ny lovia miaraka amin'ny miaramilany sy ny mponina ao aminy tsy mila latabatra sy lovia ary takelaka.
Ny fomba fanao nankalaza Tet ka somary maloto rehefa tapitra ny fotoam-pifaliana dia nivadika tsikelikely ho lasa fanao antsoina hoe fomba fanao amin'ny fanamboarana indray. Tet.
Fahatsiarovana ny faha-10 ny volana Lunar voalohany
Toe-javatra iray hafa no nitranga Thông Thanh Village (Ềông Triều, Thanh Hoá) rehefa Duke Nguyễn Khải nampanantena olona ao an-tanànany fa hiaraka aminy izy ireo hankalazana an'i Tết amin'ny andro faha-3 amin'ny volana voalohany, nefa tsy niverina izy tamin'ny fahatelo araka ny nampanantenaina. Niandry ny Duke izy ireo dia nankalaza ny mponina avy eo Tet tamin'ny andro faha-4 izany dia nampiana andro iray hafa indray izy ireo Tet, fa ny Duke kosa niverina tamin'ny faha-9 sy ny andro manaraka, izany hoe ny faha-10, olona niverimberina Tet niaraka tamin'ilay Duke izay nohajain'izy ireo lalina.
Fahatsiarovana ny faha-5 ny volana Lunar voalohany
Ny antony iray hafa, mazava kokoa dia ny hoe rehefa nanafika an'i Ching ny firenentsika tamin'ny fiandohan'ny Kỷ Dậu taona (1789), voatery nandositra ireo olona ary nanipy ireo mofomamy maloto amin'ny kianja mba tsy hihinanan'ny mpanafika azy. Amin'ny faha-5 izany hoe andro Malagasy Quang Trung nandresy ny Ching, niverina tany an-tanànany ny olona, ​​nody ireo mofomamy efa-jaza ka niondrana indray Tet Taorian'izay, isan-taona amin'ny faha-5 ny volana voalohany dia nanao fety lehibe indray ny olona izay somary nivadika tsikelikely ho fanao hankalaza ny fandresena lehibe Malagasy Quang Trung ny mpitondra ny Sinoa rehefa nitondra ny tafiny avy ny mpanjaka Phú Xuân (Hue) mba hampandroso Thăng Long ary nanenjika ireo mpanafika sinoa. Tokony ho fantatsika fa noho ny teknika nahandro ny firenentsika taloha, ny mofomamy misy ny sakeloka dia azo atsofoka ao anaty rano (madio, tsara) na dia amin'ny ririnina indraindray mandritra ny iray volana fa mbola azo hanina.
Mankalaza ny TẾT amin'ny faha-30
Azontsika atao ihany koa ny miresaka hetsika fanampiny amin'ny Villagei Bái vohitra (Gia Lương, Hà Bắc) amin'ny alàlan'ny fomba fanao amin'ny fanavaozana indray ny fiteny Tet ny faha-30 ny volana voaloham-bolana voalohany. Io ny tranga amin'ny mandarin miaramila Nguyen Cong Hiep miaraka amin'izay, a Villagei Bái vohitra izay nalaza izay nanana fahamendrehana lehibe amin'ny fanamboarana ny Đại Báiny Tempoliny, mampihena ny hetra ho an'ny mponina ao aminy, mitatitra vato hanamboarana tetezana, mamporisika ny asa fanaovana varahina ...
Amin'ny taona Mậu Tuất (taonan'ny alika) 1684 sahirana tokoa izy tamin'ny raharaha miaramila ary afaka niverina tany an-tanànany izy hankalaza Tet ihany ny faha-28 ny volana voaloham-bolana voalohany. Avy eo nomeny ny olona rehetra 18 taona sy 3 "tiền" (karazana vola vola madinika taloha) mamerina mamerina Tet miaraka amin'ny faha-30 amin'ny voalohan'ny volana voalohany. Hatramin'izany dia ny fomba fanao mankalaza Tet tamin'ny faha-30 ny volana voalohan'ny volana voalohany dia nahavelona. Avy eo, tonga tany atsimo izy ary maty rehefa ny fanao voalaza etsy aloha dia fomba iray hiarahan'ny vahoakan'ny vondron'olona mieritreritra azy sy ny fitadidiany2.
FANAMARIHANA: avy amin'ny Profesora mpiara-miasa HUNG NGUYEN MANH, Dokotera ny Phylosophy ao amin'ny tantara.
2 Araka ny filazan'i LÊ TRUNG VŨ - Tết nentin-drazana amin'ny Vietnamese - Boky voatonona, pp.146 hatramin'ny 149.
← Miandrasana ny TAONA VAOVAO - Fizarana 1
Alohan'ny HITANORO HO ANKEHITRINY - Fizarana 1 →
Comments Off amin'ny vondrona foko 54 any Vietnam - Fampidirana
Fitsidihana anio: 348
Andro farany 7 nitsidika: 2,323
Total visits: 420,574